ဒူဘိုင်းနှင့် Golden Visa အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်းတွင်စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
အကောင်းဆုံး ဒူဘိုင်းမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အေးဂျင့် နှင့်ရှေ့နေများ ဒူဘိုင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစားများဒူဘိုင်းရှိ Residency အစီအစဉ်များသည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
ဒူဘိုင်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များမှ Residency သည်ဒူဘိုင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ ဒူဘိုင်းရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှ Residency၊ ဒူဘိုင်းရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်မှ Residency၊ ဒူဘိုင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဒုတိယ Residency၊ ဒူဘိုင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency နှစ်ဆ၊ ဒူဘိုင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ယာယီနေထိုင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဒူဘိုင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဒူဘိုင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဒူဘိုင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှုနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဒူဘိုင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဒူဘိုင်းရှိစီးပွားရေးနိုင်ငံသားအစီအစဉ်၊ ဒူဘိုင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဒူဘိုင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဒူဘိုင်းနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ ဒူဘိုင်းတွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ နေထိုင်ခွင့်နှင့်ဒူဘိုင်းရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဒူဘိုင်းရှိသံတမန်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဒူဘိုင်းတွင်ဒုတိယအကြိမ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဒူဘိုင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဒူဘိုင်းရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဒူဘိုင်းရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ရွှေဗီဇာ ဒူဘိုင်းတွင်ရွှေဗီဇာ၊ ဒူဘိုင်းရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ၊ ဒူဘိုင်းရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ဒူဘိုင်းတွင်ဒုတိယရွှေဗီဇာ၊ ဒူဘိုင်းရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ဒူဘိုင်းရှိရွှေဗီဇာ၊ နိုင်ငံသားနှင့်ဒူဘိုင်းရှိရွှေဗီဇာ၊ နေထိုင်ခွင့်နှင့်ရွှေဗီဇာ ဒူဘိုင်းတွင်ဒူဘိုင်းရှိရွှေဗီဇာနိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဒူဘိုင်းရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ဒူဘိုင်းရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ
ထပ်မံအထောက်အပံ့နှင့်အတူဒူဘိုင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏ Residency အားလုံးအတွက်“ 1 stop solutions” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု: AED 1,000,000 (ယူရို 250,000)
ဒူဘိုင်းသည်တကယ့်အစစ်အမှန်ဖြစ်သောမြို့ဟောင်းများဖြစ်သည်။ လူ ဦး ရေ၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည်ယခင်ဖြစ်ရပ်များကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်းတွင်နေထိုင်ခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်ဆင်တူသည်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးဒူဘိုင်းကိုအိမ်သို့ခေါ်သင့်သည်။ ဒူဘိုင်းသည်မေ့မရနိုင်အောင်အားစိုက်ပြီးဖြစ်ပျက်နေသောရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာဤနည်းဖြင့်သင်၏လူထုလှုပ်ရှားမှုအများစုကိုအသုံးချပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်ပျော်စရာကောင်းသောလူနေမှုဘ ၀ ကိုလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည့်ဖြစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
ဘဝ၏လူမှုရေးအခြမ်းကြောက်မက်ဘွယ်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ဟောင်းနွမ်းသောဟောင်းနွမ်းစခန်းများသည်တည်းခိုခန်းများသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကပင်လယ်ကမ်းခြေကလပ်သို့ လာရောက်၍ ရုံးခန်းများကိုလေးစားရန်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အချိန်အတော်အတန်ကိုဖြည့်ဆည်းကြသောအခါသူတို့တည်းခိုနေကြသည်။ အခြားသူများအတွက်မူစကြာဝinsideာအတွင်းရှိအခြားကမ္ဘာဂြိုဟ်များထက်ခိုင်မာစွာအာရုံစိုက်ထားသောအားကစားကလပ်များရှိသည်။ ညတွင်ဘဝ၏လူမှုရေးဘ ၀ သည်ဒူဘိုင်းနှင့်အတူအရက်ဆိုင်အမျိုးမျိုးကိုလက်ခံကစားသောအရက်ဆိုင်များ၊ ကလပ်များနှင့်ကဖေးများအထိဆက်လက်စီးဆင်းသွားသည်။ ဒူဘိုင်းရှိသင်ကြားပို့ချမှုအခြေခံမူများသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးနှစ်စဉ်နီးပါးကျောင်းများနှင့်တက္ကသိုလ်အသစ်များကိုတည်ဆောက်လျက်ရှိသည်။ သိသာထင်ရှားသည့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတိုင်းသည်ဒူဘိုင်းတွင်အခြေစိုက်စခန်းရှိသည် - သို့မဟုတ်၊ ဤသည်များစွာသောအဖွင့်ရှိပါတယ်ဆိုလို။ တစ်ခုမှာသိုက်များကိုထိရောက်စွာနေရာချထားနိုင်သည် - ထို့ကြောင့်သင်သည်ဒူဘိုင်းတွင်အလွန်ကောင်းသောလျော်ကြေးကိုရရှိပြီးအချို့ကိုအိမ်သို့ပို့နိုင်သည်။ စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုက၎င်း၏ကမ္ဘာအနှံ့မှထွက်ခွာသွားရန်ဖိတ်ခေါ်သည့်၎င်း၏သိသာထင်ရှားသည့်ကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းလေဆိပ်နှင့်တဖြည်းဖြည်းရရှိနိုင်သည်။ ဒူဘိုင်းသည်အခြားသူများ၏ခံယူချက်နှင့်လူနေမှုပုံစံကိုထောက်ထားညှာတာစွာဖြင့်သက်ညှာသောစော်ဘွားများနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အစ္စလာမ်၏လမ်းညွှန်ချက်များကိုလူတိုင်း၏နေ့စဉ်ဖြစ်တည်မှုအတွက်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသင့်တော်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ နိုင်ငံခြားသားများသည်ဒူဘိုင်းတွင်အရက်များဝယ်ယူနိုင်ပြီးရမRamွာန်လရှည်ကာလအတွင်းအစာစားခွင့်ပြုသည်။
အငှားယာဉ်များသည်အလွန်ကျိုးနွံပြီးအများပြည်သူဆိုင်ရာအခွင့်အာဏာသည်အများပြည်သူသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်သို့အကြီးအကျယ်ထည့်သွင်းထားသည်။ ကားများနှင့်ရေနံအမှန်ပင်အလွန်ကျိုးနွံများမှာ! မိသားစုများအနေဖြင့်အိမ်ပြန်လာရန်အကူအညီရခြင်းသည်ပုံမှန်အလေ့အကျင့်ဖြစ်သည်။ ဒူဘိုင်းသည်အဓိကကျသောအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးကြောင့် ostracizes နှင့်အတူလှုပ်ရှားမှုအတွက်အထူးသဖြင့်ပင်မဆုံးဖြတ်ချက်ရရှိခဲ့သည်။
ဒူဘိုင်းသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာကြီးကိုလွှမ်းမိုးခဲ့သောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာဖိအားပေးမှုများရှိလင့်ကစားဒူဘိုင်းသည်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးအိမ်နီးချင်းအိမ်ခြံမြေစျေးကွက်တွင်ခိုင်မာသောသီအိုရီအတွက်ပွင့်လင်းသောတံခါးပွင့်သွားသည်။
ဒူဘိုင်းတွင်နေထိုင်ခြင်းသည်အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ယခင်နေထိုင်မှုပုံစံများကိုအဘယ်ကြောင့်ဤမျှစိတ် ၀ င်စားရသည့်အကြောင်းရင်းနောက်ကွယ်ရှိအခြားသော့ချက်တစ်ခုမှာအထူးသဖြင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ခမ်းနားထည်ဝါသောပတ်ဝန်းကျင်၊ ဘဝရွေ့လျားမှုနှင့်ကျယ်ပြန့်စွာကျောင်းဝင်းနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုစံနှုန်းများကိုပြန်ပြောင်းသည်။ ရှည်လျားသောခရီးများသို့ဒူဘိုင်းသို့ပြောင်းရွှေ့လာသောနိုင်ငံခြားသားများသည် ၀ င်ငွေခွန်မှလွတ်မြောက်လာသောသူတို့၏လျော်ကြေးကိုအမှန်တကယ်ရရှိနိုင်သည်။ အချို့သောကျွမ်းကျင်သူများအတွက်ဒူဘိုင်းတွင် ၀ င်ငွေခွန်မ ၀ င်ပါ။ ထို့အပြင်အပိုဆောင်းအခွန်အတိုးများနှင့်ထောင်ချောက်အချို့လည်းရှိသည်။ ဒူဘိုင်းတွင်နေထိုင်ခြင်းကိုကြည့်သည့်အခါများသောအားဖြင့်ယေဘုယျအားဖြင့်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်းမြို့တော်အကြောင်းဆွေးနွေးလေ့ရှိသည်။ ဤသည်မှာဗြိတိန်နိုင်ငံသားအများစုသည်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌အခြေချနေထိုင်ရာနေရာနှင့်အလုပ်အကိုင်အချို့ရှာဖွေရန်နေရာဖြစ်သည်။ ဒူဘိုင်းမြို့တော်သည်လည်းအလားတူပင်ခရိုင်တစ်ခုလုံး၏ဘဝဗဟိုချက်ဖြစ်သည်။
ဒူဘိုင်းတွင်နေထိုင်သည့်ဘဝလမ်းစဉ်သည်ဟောင်းနွမ်းနေသောညည်းသံများမကြားရသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ နွေးထွေးမှုကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်မိုးလုံလေလုံအအေးလေ့ကျင့်ခန်းများကိုသာကန့်သတ်ထားသည်မှာမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ စျေး ၀ ယ်ထွက်ခြင်းများအပါအ ၀ င်မတူကွဲပြားသည့်အမျိုးမျိုးသောကွဲပြားခြားနားမှုများရှိသည်။
အပန်းဖြေဥယျာဉ်များ၏နယ်ပယ်မှသည်ပုဂ္ဂလိကပင်လယ်ကမ်းခြေကလပ်များအထိ၊ မရေမတွက်နိုင်လောက်အောင်များပြားလှသောစျေးဝယ်စင်တာများမှသည်ရုပ်ရှင်အဆောက်အ ဦး များနှင့်ကဖေးများစွာရှိသည်။ မိုးလုံလေလုံနှင်းလျှောစီးခြင်းမှသည်အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေပွဲများအထိ - ဒူဘိုင်းတွင်ယင်းတို့အားလုံးအမှန်ရှိသည်။
ဒူဘိုင်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အခြေခံအသေးစိတ်
AED 1,000,000 (ယူရို 250,000)
အတွက်အပိုဆောင်းအခကြေးငွေများ အတွက်ရွှေဗီဇာ ဒူဘိုင်း
AED 1,100 (ယူရို 280)
စီးပွားရေးဗီဇာ / ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာ (အလုပ်လုပ်ခွင့်)
ဒူဘိုင်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency အတွက်အချိန်ထုတ်ယူခြင်း
အဘယ်ကြောင့်ဒူဘိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ဘို့သွားရ
ယူအေအီး၊ အထူးသဖြင့်ဒူဘိုင်းသည်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်း၊ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ပူနွေးသောရာသီဥတု၊ လုံ့လရှိသည့်ညဘက်နှင့်အခွန်နိမ့်သောပတ်ဝန်းကျင်တို့သည်ပြည့်စုံသောလူနေမှုအခြေအနေကိုပေးသည်။ နေထိုင်ခွင့်ဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အသစ်ကြောင့်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူနေထိုင်ရန်ခွင့်ပြုချက်ကိုသင်အလွယ်တကူရနိုင်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်ကအရမ်းမြန်တယ် ခွင့်ပြုချက်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ တစ်ပတ်သို့မဟုတ်တစ်လသာကြာသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏတိုးမြှင့်ခြင်းမရှိဘဲသင်၏လျှောက်လွှာတွင်သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်မှီခိုနေသောကလေးများပါ ၀ င်နိုင်သည်။
Residency ဒူဘိုင်းရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် insite
သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်၍ ဗီဇာ ၂ မျိုးရရှိနိုင်သည်။ ပထမ ဦး စွာသင်သည် ၆ လကြာဗီဇာမျိုးစုံရနိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သူသည်၎င်းအတွက်အချိန်ကိုတွက်ချက်သည်တစ်ပတ်ခန့်ကြာပြီး၎င်းသည်အပိုဆောင်းအခကြေးငွေများမှကင်းလွတ်သည်။ ဒုတိယ၊ သင်သည်နှစ်နှစ်နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာကိုလျှောက်ထားနိုင်သည်။ ဤရွေးချယ်မှုသည် (ခန့်မှန်းခြေတစ်လခန့်) လုပ်ရန်အချိန်အနည်းငယ်ကြာပါသည်။ သင်နှင့်သင့်မိသားစုအတွက်နှစ်စဉ်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းဆောင်ရည်လိုင်စင်အတွက်ငွေကြေးအရင်းအမြစ်အထောက်အထားများအပိုလိုအပ်ချက်များရှိသည်။
သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ကိုရယူလိုပါကအနည်းဆုံး AED ၁ သန်း (ယူရို ၂၅၀,၀၀၀) အတွက်နေထိုင်ရန်အတွက်လူနေအိမ်တစ်အိမ်ကို ၀ ယ်ရမည်။
အပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်များတွင်ဗီဇာအမျိုးအစားအတွက်ဗီဇာကြေး ၁,၁၀၀ (ယူရို ၂၈၀)၊ ဘာသာရေးအခကြေးငွေ AED 1,100 (ယူရို ၁၀၀) နှင့်နှစ်နှစ်ဗီဇာအတွက်နှစ်စဉ်ပိုင်ဆိုင်မှုလိုင်စင်ကြေး (ယူရို ၅၀၀) ပါရှိသည်။ ဤတွင်ဖော်ပြထားသောအခကြေးငွေများသည်လျှောက်ထားသူတစ် ဦး တည်းနှင့်သက်ဆိုင်ပြီးမိသားစုဝင်များအတွက်လည်းအပိုကုန်ကျငွေများရှိသည်။
ဒူဘိုင်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နေထိုင်ခွင့် ဒူဘိုင်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များကသည် နှင့် နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ ဒူဘိုင်းများအတွက် ဒူဘိုင်းရှိဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏မိသားစုများအားဒူဘိုင်းမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအထောက်အပံ့၊ ဒူဘိုင်းမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြား ၃၇ နိုင်ငံရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများထောက်ပံ့ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဒူဘိုင်းမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဒူဘိုင်းမှ Golden Visa သို့မဟုတ်ဒူဘိုင်းမှဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ကိုကန့်သတ်ထားသည်သာမကဒူဘိုင်းမှအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်၊ ဒူဘိုင်းရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့်ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာစီမံကိန်းများနှင့်အခြားအရာများပါဝင်သည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ရာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်နိုင်မှတဆင့်ဒူဘိုင်းအဘို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ ဒူဘိုင်းအတွက်, ဒူဘိုင်းအတွက်တတ်နိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့ရပျ, ဒူဘိုင်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကတတ်နိုင် Residency, ဒူဘိုင်းများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကတတ်နိုင် Residency နှင့်ဒူဘိုင်းများအတွက်တတ်နိုင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီ
ဒူဘိုင်းမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒူဘိုင်းရှိရွှေဗီဇာ။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဒူဘိုင်းမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း။
ဒူဘိုင်းမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
ဒူဘိုင်းမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
ဒူဘိုင်းရှိနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
ဒူဘိုင်းမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
ဒူဘိုင်းမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
ဒူဘိုင်းမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်းရှိအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူကဒူဘိုင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှပြန်လည်အမြတ်အစွန်းရရှိသင့်သည်ဟူသောရှုထောင့်နှင့်အညီပံ့ပိုးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဒူဘိုင်းရှိအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီအနည်းငယ်နှင့်ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပြီးဒူဘိုင်းရှိကောင်းသောနေရာများတွင်အကောင်းဆုံးအမြတ်အစွန်းများရရှိထားသည်။
သိရန်လိုအပ် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ဒူဘိုင်း Residency
ဒူဘိုင်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေရှေ့နေကဒူဘိုင်းသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏အောင်မြင်သော Residency အတွက်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များပေးလိမ့်မည်။ Residency by Dubai မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
မည်သည့်အကြံပြုချက်များကိုအခြေခံရမည်ကို အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ဒူဘိုင်းမှသို့မဟုတ်ဒူဘိုင်းသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်လိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency ကိုဒူဘိုင်းအတွက် Residence Permit ရယူရန်နှင့် Dubai မှ Residence Permit ရယူရန်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ကိုအကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံစာပြင်ဆင်ရန်နှင့်ငြင်းဆန်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက် First Diligence ကိုစတင်လုပ်ဆောင်သည်။
ဒူဘိုင်းအတွက်လုံ့လဝီရိယရှိရှိလေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
သင်၏ Residency နှင့်အတူဒူဘိုင်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်များနှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
စာရွက်စာတမ်းများဘာသာပြန်ခြင်းနှင့် Apostille ဒူဘိုင်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်လွှာတင်ခြင်း။ Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးရှေ့နေများသည်ဒူဘိုင်းနှင့်ရွှေဗီဇာဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပုံစံများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုဖြည့်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
သင်၏နှင့်သင်၏မိသားစုနေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်းအား Residency အတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်လွှာတင်ပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များနှင့်အတူဖြည့်ပါလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်းရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများမှအောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ဒူဘိုင်းရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား Residency ကိုထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နေထိုင်ခွင့် ဒူဘိုင်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ကုန်သည်များသို့ဒူဘိုင်းမှသို့မဟုတ်လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်ဖြန့်ဖြူးသူများအားကမ်းလှမ်းခြင်းမပြုပါ။
နေထိုင်ခွင့် ဒူဘိုင်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များအားဖွငျ့ဖွစျသညျ ဒူဘိုင်းတွင်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရန်သို့မဟုတ်ဒူဘိုင်းရှိသို့မဟုတ်သို့မဟုတ်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များကိုစက်မှုစောင့်ကြပ်ခြင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ဒူဘိုင်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံသည် ဒူဘိုင်းတွင်တရားမဝင်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် ဒူဘိုင်းများအတွက် ဒူဘိုင်းရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူတစ် ဦး ချင်းအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ဒူဘိုင်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ဒူဘိုင်းရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် ဒူဘိုင်းအတွက်အရောင်းအ ၀ ယ်၊ ဒူဘိုင်းတွင်သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့အတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အထောက်အပံ့မရနိုင်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ဒူဘိုင်းများအတွက် တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နေထိုင်ခွင့် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု ဒူဘိုင်းများအတွက် ဒူဘိုင်းရှိဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ဒူဘိုင်း ဒူဘိုင်းရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်ခွင့် ဒူဘိုင်းအတွက်ရှေ့ရပျ ဒူဘိုင်းရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုစီးပွားရေးမပံ့ပိုးပါနှင့်။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC မှဝယ်ယူသူများအတွက် Dubai နှင့် KYC အတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုသေချာစေရန်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ထားသော်လည်းလျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုရန်အတွက်ဒူဘိုင်းအာဏာပိုင်များမှငြင်းပယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်။ နေထိုင်ခွင့် ဒူဘိုင်းမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Residency မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံများနှင့်ဒူဘိုင်း၏တရားဝင်လိုအပ်ချက်များကြောင့်ကျွနု်ပ်တို့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းမှုများကိုပြုလုပ်သည်။
ဒူဘိုင်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ဒူဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်နိုင်သောနှုန်းဖြင့်စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းကိုပေးသည်။
Dual Residency အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့ပြီးဒူဘိုင်းအတွက်ဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏မိသားစုများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
ဖောက်သည်များအားပံ့ပိုးမှုပေးသောဒူဘိုင်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများနှင့်ဒူဘိုင်းအတွက်တရား ၀ င်ကိုယ်စားလှယ်များ၏အတွေ့အကြုံရှိသော Residency ။
ဒူဘိုင်းအတွက် Residency မတိုင်မီနှင့်ခွင့်ပြုချက်အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည်ဒူဘိုင်းအတွက်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပံ့ပိုးမှုအတွက်ထိုတွင်ရှိလိမ့်မည်
Residency တွင်ဒူဘိုင်းအပါအဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိပြီးကမ္ဘာအနှံ့ရှိအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုကူညီသည်။
အမှု၌၊ သင်၏ Residency သည်ဒူဘိုင်းသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပျက်ကွက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံပေါင်း ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
Residency အတွက် Dubai မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုတွက်ချက်ပါ
Residency ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုဒူဘိုင်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်တွက်ချက်ရန်မိသားစု ၀ င်များနှင့်သူတို့၏သက်တမ်းအပါအဝင်အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုဖြည့်စွက်ပါ။ ဒူဘိုင်းအတွက်ဖောက်သည်အမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ ဒူဘိုင်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်နှင့်အခြားအခကြေးငွေများဖြင့် Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်များပါဝင်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ ဒူဘိုင်းများအတွက်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်ချင်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဒူဘိုင်းတွင်ပေးသောနောက်ထပ် ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုစာရင်းပြုစုထားသည်။
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူဒူဘိုင်းသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်ထားပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်းအတွက်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေဖြင့်၊ သင်တတ်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းများဖြင့်ဒူဘိုင်းတွင်လိုအပ်သည့်အချိန်နှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုအမြောက်အများကိုပေးအပ်ရန်ရှိပါသည်။
ဒူဘိုင်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းမှ Residency မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်းတွင်လည်းစီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ ၎င်းကိုဒူဘိုင်းအတွက်အခြားအတိုင်ပင်ခံများကကျွန်ုပ်တို့အားဒူဘိုင်းနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်တစ်နေရာတည်းဖြစ်စေသည်။
ဒူဘိုင်းအတွက်မိသားစုများ၊ တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့်ဒူဘိုင်းနှင့်နိုင်ငံတကာမှအကူအညီဖြင့်ဒူဘိုင်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်၏ Residency ကိုကျော်လွန်သောလမ်းကိုထောက်ခံသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ ဒူဘိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင် or Offshore နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ (ဒူဘိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပို၍ စျေးသက်သာသော) ။
ဒူဘိုင်းသို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချမည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် ဒူဘိုင်းအတွက်ကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကောင့် ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီဘဏ်အကောင့်လည်းရှိတယ်။ ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်တွေလည်းကူညီနိုင်တယ်။
ဒါ့အပြင်ဒူဘိုင်းမှာအကြံဥာဏ်တွေလိုအပ်တယ် ဒူဘိုင်းအတွက်ဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် ရိုးရာသို့မဟုတ်ဒူဘိုင်းရှိ fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်သို့မဟုတ် crypto ဖြေရှင်းမှုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက် သငျသညျဖို့စီစဉ်ထားလျှင်ဒူဘိုင်း ဒူဘိုင်းတွင်ရှိသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဝယ်ယူခြင်းဖြင့်စီးပွားရေးစတင်ပါ ဒူဘိုင်းအတွက်ချက်ချင်းစတင်ဘို့။
ဒူဘိုင်းရှိ HR ဝန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ ဒူဘိုင်းရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် ဒူဘိုင်းတွင်နေရာလွတ် post အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ဒူဘိုင်းအတွက် virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
ဒူဘိုင်းအတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ ဒူဘိုင်းအတွက် virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
စာရင်းကိုင်, ဒူဘိုင်းအတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
ဒူဘိုင်းရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ
ဒူဘိုင်းတွင် setup ကိုစီးပွားရေး
Residency ပြီးနောက်ဒူဘိုင်းသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဒူဘိုင်း.
ဒူဘိုင်းတွင် Web ဒီဇိုင်း
ဒူဘိုင်းတွင် web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ဒူဘိုင်းတွင် Blockchain ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
ဒူဘိုင်းတွင် App Development
ဒူဘိုင်းအတွက် software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ဒူဘိုင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ရှေ့နေများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအဖြေများအားဖြင့်တရား ၀ င်နေထိုင်ခွင့်ကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဒူဘိုင်းအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်၊ ဒူဘိုင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေရေးရာကုမ္ပဏီသည်ဒူဘိုင်းတွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။ ဒူဘိုင်းတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်သူတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုများ ဒူဘိုင်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ဖောက်သည်၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။
သင်၏မိသားစုဝင်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်ဒူဘိုင်းတွင်နေထိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုချက်ရှိပြီး၊ ဒူဘိုင်း၌နေထိုင်ခွင့်ကိုအတည်ပြုပြီးသည်။
ဒူဘိုင်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများက Residency ကသင်၏ကိုယ်စားတရားဝင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်ရှေ့နေသည်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဒူဘိုင်းသို့ရောက်နေလျှင်သို့မဟုတ်ဒူဘိုင်းသို့သွားရောက်ရန်စီစဉ်ထားပါကကျွန်ုပ်တို့အားသင်၏ရှေ့နေအားဤနေရာတွင်ရယူနိုင်ပါသည်။
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ဒူဘိုင်းအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ပါကဒူဘိုင်းပိုင်နက်တွင်အသုံးပြုရန်သင်၏ရှေ့နေအားတရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ ၎င်းကိုတမန်တော်အက်ဒွပ်အားတရားဝင်ဖြစ်စေတရားဝင်ဒူဘိုင်းကောင်စစ်ဝန်ရုံးကတရားဝင်ဖြစ်စေသင့်သည်။
အမေးအဖြေများ - ဒူဘိုင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း
စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည့်နည်းလမ်းများဖြင့်ဒူဘိုင်းစီးပွားရေးကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဒူဘိုင်း၏နေထိုင်မှုကိုဒူဘိုင်းသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဒူဘိုင်းသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း။ ဒူဘိုင်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ခွင့်၊ ဒူဘိုင်းရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခြင်းနှင့်ဒူဘိုင်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများကကူညီခြင်း ဒူဘိုင်းမှာ။
ဒူဘိုင်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့် ဒူဘိုင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခွင့် ဒူဘိုင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကနေထိုင်ခွင့် ဒူဘိုင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကနေထိုင်ခွင့် | ဒူဘိုင်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကနေထိုင်မှု
ဒူဘိုင်းသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုဒူဘိုင်းစီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည့်နည်းလမ်းများဖြင့်ဒူဘိုင်းနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဒူဘိုင်းနိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဒူဘိုင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဒူဘိုင်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုဒူဘိုင်းရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားခြင်း၊ ဒူဘိုင်းရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများမှနိုင်ငံသားနှင့်ဒူဘိုင်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများမှနိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားခြင်း။ ဒူဘိုင်းရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များနှင့်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်ဒူဘိုင်းရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများ။
ဒူဘိုင်းအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှု ဒူဘိုင်းရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ ဒူဘိုင်းရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရှေ့နေများ ဒူဘိုင်းရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ ဒူဘိုင်းအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူးများ ဒူဘိုင်းအတွက်လူကြိုက်များသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
ဒူဘိုင်းနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုဒူဘိုင်းနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အိမ်ခြံမြေ၊ စီးပွားရေး၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်တို့ဖြင့်တရားဝင်နိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းစသည်တို့ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဒူဘိုင်းသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားခြင်း၊ ဒူဘိုင်းအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဒူဘိုင်း၌ကျွန်ုပ်တို့၏ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ ဒူဘိုင်းရှိဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများနှင့်ဒူဘိုင်းအတွက်ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အကြံပေးများ၊ ဒူဘိုင်းတွင်အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဒူဘိုင်းရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်။
ဒူဘိုင်းအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှု ဒူဘိုင်းရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ ဒူဘိုင်းရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ဒူဘိုင်းနိုင်ငံ၌နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ဒူဘိုင်းအတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံ
ဒူဘိုင်းရှိရွှေဗီဇာကိုအစိုးရ၏ငွေချေးစာချုပ်၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေစသည့်နည်းလမ်းများဖြင့်ဒူဘိုင်းစီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဒူဘိုင်း၏နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဒူဘိုင်းသို့ရွှေဗီဇာလျှောက်ထားခြင်း၊ ဒူဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ ဒူဘိုင်းရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့်ဒူဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံများ၊ ဒူဘိုင်းရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဒူဘိုင်းရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်ဒူဘိုင်းအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ
ဒူဘိုင်းအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | ဒူဘိုင်းရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ ဒူဘိုင်းရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ဒူဘိုင်းရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ဒူဘိုင်းအတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
ဒူဘိုင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဘာလဲ။
ဒူဘိုင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ AED 1,000,000 (EUR 250,000) ဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒူဘိုင်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေနှင့်ဒူဘိုင်းမှအေးဂျင့်များသည် Residency ကိုဒူဘိုင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပံ့ပိုးသည်။
Residency of Dubai သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် Residency သည် Dubai အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်မြင့်မားသောအမြတ်အစွန်းတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ဖြစ်သည်။ Residency မှ Dubai သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြေးကိုသာပေးသည်။ Residency အတွက်အခြားအထောက်အပံ့များကိုလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုများပေးသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ကိုမည်သည့်နိုင်ငံသားမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အာရှမှဒူဘိုင်းသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အာဖရိကမှဒူဘိုင်းသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဥရောပမှဒူဘိုင်းသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ တောင်အမေရိကမှဒူဘိုင်းသို့ Residency၊ မလေးရှားမှဒူဘိုင်းသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှဒူဘိုင်းသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အင်ဒိုနီးရှားမှဒူဘိုင်းမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ သီရိလင်္ကာမှဒူဘိုင်းသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ နီပေါမှဒူဘိုင်းသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ အိန္ဒိယမှဒူဘိုင်းမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် Residency ယူအေအီးမှဒူဘိုင်းမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းညွှန်မှုအားဖြင့် Professional ကနေထိုင်မှု ဒူဘိုင်းများအတွက်
mPay - ဒူဘိုင်းအစိုးရ
ယူအေအီးဖက်ဒရယ်နှင့်ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများယူအေအီး၏ဒေတာပေါ်တယ် - Bayanat
ဘာရိန်းအစိုးရ SMS ဝန်ဆောင်မှု
ကာတာအစိုးရ app များ
ယူအေအီး၏ eParticipation portal - Sharik က
ကာတာအစိုးရ SMS ဝန်ဆောင်မှု
အလုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များအတွက်ယူအေအီး၏ပေါ်တယ် - ယူအေအီးတွင်အလုပ်လုပ်ခြင်း
Ras Al Khaimah အစိုးရ၏တရားဝင်ပေါ်တယ်
အကောင်းဆုံး m- အစိုးရဝန်ဆောင်မှုဆု
link ကိုမှ ဒူဘိုင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန , ဒူဘိုင်းရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရှိန်အဟုန်မြှင့်ရေးမူဝါဒများရေးဆွဲရန်တာဝန်ရှိသည်